в Maitiro / mafambiro, Unyanzvi / Tekinoroji
Musoro wekurima biologization wave mumwe wevanonyanya kukurumidza mumakore apfuura. Takataura naSvetlana Nekoval, mukuru werabhoritari yenyanzvi yematomatisi kuAll-Russian Research Institute yeBiological Plant Protection (FGBNU VNIIBZR), nezve masayendisiti ekuRussia anoongorora tarisiro yekutangwa kwenzira dzekushandisa uye mashandisirwo ezvigadzirwa zvehutachiona mumapurazi epamba ekurima.
— Мировой рынок биопрепаратов, по zvinoenderana nekufungidzira kwenyanzvi, inokura ne8% pagore. Tinogona here kutaura kuti maitiro aya anoshanda kuRussia futi?
Gore rino, kufarira kwevarimi muzvigadzirwa zvehupenyu kwakakurudzirwa nekupinda mukushanda kwemutemo "Pane zvigadzirwa zve organic uye nekugadziriswa kune mamwe mabasa ezvemitemo eRussia Federation", zvinoenderana izvo chete zvigadzirwa zvekuchengetedza zvidyarwa zvezvirimwa zvinogona kushandiswa kuwana zvigadzirwa zvinochengetedza nharaunda uye chikafu.
— Кого в России можно назвать ivo vatengi vakuru vezvigadzirwa zvehupenyu (mukugadzirwa kwezvirimwa)?
Sekureva kwaSergei Korshunov, Sachigaro weBhodi reUnited Union yeOrganic Agriculture, hapana mapurazi muCentral Russia asingashandise nzira dzehupenyu nenzira ipi neipi (kushandiswa kwefetiraiza yevhu kune ivhu, kushandiswa kwehutachiona hwehutachiona, kuunzwa kwemanyowa akasvibira kana kuvhara zvirimwa mukutenderera kwezvirimwa). Ndinobvumirana naye.
Mazhinji mapurazi mahombe anoisa padivi minda yekuyedza bio-kurima neziso kugadzirwa kwezvinhu zvakasikwa zvizere.
Icho chinetso chikuru mu biology chiri chaizvo mukuwedzera kwayo. Maitiro ebhayoroji asina kuverenga kwega kwega ndima imwe neimwe uye chirimwa chimwe nechimwe haishande. Izvo zvinodikanwa kugara uchiongorora mamiriro evhu uye kuongorora kukura kwezvirimwa. Vazhinji varimi havana kugadzirira kuitisa zvakaringana mamiriro ehutano hwezvirimwa kana vasingakwanise kuzvifungidzira.
tendera, nokudaro, vanoshanda vasingafungi ne biologization, kazhinji vachiwana mhedzisiro isingagutsi. Uye panguva imwecheteyo, mabhizinesi mazhinji ekurima anga achishandisa bio-nzira muzvirongwa zvakabatanidzwa zvekurima zvirimwa zvekurima kweanopfuura makore gumi, vabudirira kugona aya biotechnologies.
Kana ese mamiriro uye mirawu yekushandiswa kweyakagadzirwa zvigadzirwa zvasangana, saka kugona kwehupenyu kunoenderana padanho rekubudirira kwemakemikari zvigadzirwa, uye mitengo yacho yakadzika kwazvo. Kunyangwe, zvakadaro, zvakawanda zvinoenderana nerudzii rwechinetso icho hupfumi huri kuyedza kugadzirisa. Kushandisa nzira dzehupenyu dzekuchengetedza dura, inofanirwa kutorwa mupfungwa kuti kugona kukuru kunoitwa kana uchiita matanho ekudzivirira. Kana zvigadzirwa zvehupenyu zvichishandiswa pakurapa, mune yega kesi inofanirwa kusarudza zvimwe (zvinoenderana nedanho rekupararira kwezvinhu zvinokuvadza) madosi emishonga.
Muenzaniso wakajeka wekuti zvinokwanisika kuzadzikisa mhedzisiro uye kudzikisa mutengo wekushandisa michina yekudzivirira ndeyekutsvagiswa kwerabhoritari, kunoitwa pamwe chete nekambani yeBiotechagro, kudzidza nzira yekudzivirira yemabhurobheri kubva kuzvinhu zvinokuvadza, kusanganisira nematodes, pamwe nekudzidza kushanda. kudzivirirwa kwembatatisi muvhu rakavhurika ne microbiological gadziriro inogadzirwa ne LLC Biotehagro.
Nerubatsiro rwezvigadzirwa zvehupenyu zvichibva pane zvinobatsira zvisikwa zvidiki, takakwanisa kudzora kukura nekupararira kwezvinhu zvinokuvadza mukati meEPV, kuwedzera (kudzoreredza) goho remhando dzakasiyana dzemastrawberry nembatatisi, kudzikisa zvakanyanya mutengo wekutora matanho ekudzivirira; kuderedza mutoro wemushonga wezvipembenene pane zvirimwa uye ivhu, kusimudzira kunaka kwechirimwa.
Semuenzaniso, goho rembatatisi rakawedzera ne biosecurity
ne15%, uye mutengo wezvigadzirwa zvehupenyu uchienzaniswa nemakemikari vamiririri wakadzikira ka6, uye panguva imwecheteyo, starch uye vhitamini C zvirimo mumatubhu zvakawedzera uye huwandu hwenitrate senitrogen hwakaderera.
Kana iyo purazi isina kugutsikana nemhedzisiro yekushandiswa kwezvigadzirwa zvehupenyu, vagadziri kana vatengesi vanowanzo kupomedzerwa kutadza. Dzimwe nguva kushushikana kwemumwe mushonga kunoendeswa kune kwese kudzivirirwa kwehutachiona hwakazara. Panguva imwecheteyo, pasina ruzivo mukushanda pamwe neyakagadzirwa zvigadzirwa, agronomists anowanzo kufuratira kurudziro yenyanzvi.
Zvikanganiso zvakajairika kana uchishanda ne biologics:
• Kukundikana kutevedzera mamiriro ekuchengetedza.
Zvekugadzirira zvine microorganisms mhenyu, kuomerera zvakanyanya kune ekuchengetedza mamiriro kunodiwa. Kune tupukanana tusinga zembere tembiricha inokwira kusvika + 30 ° C, kunyanya epfupi-kwenguva. Kune vamwe, zvine njodzi. Uye zvakare, mune kumwe kugadzirira, microorganisms inogona kunge iri muchimiro chemasero mapenyu uye inoteerera kune tembiricha shanduko, mune vamwe ivo vanogara mune spore fomu.
• Kushandisa mishonga ine zuva rapera.
Zvigadzirwa zvehupenyu, semimwe michina yekudzivirira yezvirimwa, mafetiraiza uye zvinokudziridza zvekukura, zvine hupenyu hwadzo pasherefu. Izvo zvinoenderana nesarudzo chaiyo yeiyo chigadzirwa chigadzirwa. Kugadzirira kune mamwe mabhakitiriya eiyo genus Pseudomonas kana Rhizobium (aya ekupedzisira ari chikamu chemabioinoculants anoshandiswa kurapa mhodzi yemarume
Ndokumbira utarise kuti pane zvakanyorwa mugadziri anoratidza hupenyu hwesherufu mune isina kuvhurwa yekutanga kurongedza. Vanhu vazhinji vanokanganwa iyi "isingakoshi" tsananguro, vachifunga kuti yakavhurika pasuru inomira kwegore pasina kurasikirwa nehunhu.
• Kurapa nezvigadzirwa zvehupenyu pakarepo mushure meanorwisa mabhakitiriya kana pamwe chete nazvo.
Microbiological zvigadzirwa zvinogona kushandiswa panguva imwe chete nezvimwe zvipenyu zvigadzirwa, asi kwete zvese uye kwete zvese. Iko kune akati wandei emamiririri ezvakaberekwa mavambo (zvigadzirwa zve streptomycetes) ayo anoshandiswa mukukura kwezvirimwa semishonga inorwisa mabhakitiriya. Mishonga mitatu yakadaro yakanyoreswa munyika medu: "Kasugamycin", "Fitolavin" uye "Fitoplasmin". Mari idzi dzinoshandiswa zvinobudirira kurwisa zvirwere, iwe
inonzi utachiona hunokuvadza. Kubatanidza kubudirira, zvingave zvine musoro kurapa zvirimwa mushure mekuuraya utachiona nemishonga inorwisa mabhakitiriya uye nekuwedzera microflora muvhu. Nekudaro, hazvigoneke kuwedzera microbiological vamiririri mumudziyo mumwe kumushonga unorwisa mabhakitiriya uye kuita nemubatanidzwa mumwe chete. Kutanga, unofanirwa kurapa nemushonga unorwisa mabhakitiriya, uye mushure memazuva manomwe kusvika kumakumi masere, pfira zvirimwa kana kudiridza ivhu neyakagadzirwa chigadzirwa nehutachiona huripo. Zvakare, hazvigoneke kurapa nema microbiological gadziriro panguva imwe chete kana nekukurumidza mushure mekumwaya zvirimwa nemishonga ine mhangura.
• Kurapwa munguva inopisa yezuva mukati mezuva.
Kushandiswa kweshanduko yekushanda isingagumi.
• Mhando zhinji dzemvura dzekugadzirira dzinofanira kusanganiswa dzisati dzadururwa kubva mupakeji yekutanga mumudziyo wekugadzirira mhinduro.
Kugadzirira kwemhinduro mumvura yechando.
Kazhinji, zvinodhaka zvinosanganiswa mumvura inotonhorera (semuenzaniso, kubva patsime kana tsime). Izvi zvinoita kuti mhinduro isanyanya kushanda. Zvakanakisisa kugadzirira inoshanda mhinduro mune inodziya (kana tembiricha yemukati) mvura.
• Kusacherechedzwa kwemitengo yekushandisa, frequency rate uye nzira dzekushandisa.
• Kurapa kusingatarisirwi kana kuwanda kwenhamba yekurapwa.
MuKrasnodar Territory, iye chete akanyoreswa anogadzira zvigadzirwa zvehupenyu zvekuchengetedza miti ndeye LLC Biotehagro.
Pane zvese, hongu, iyo indasitiri ine matambudziko mazhinji: mitemo haina kugadzirwa uye nzira dzinoona mhando yemishonga hadzina kuitwa zviri pamutemo; hapana marabhoritari ematunhu anoongorora gadziriro yebhakitiriya yemhando uye titer; iro repamutemo basa revagadziri yemhando yemishonga haina kutsanangurwa; hapana hutongi hwehurumende pamusoro pekushandisa kwavo.
Kunyoreswa kwezvigadzirwa muRussia kunoramba kuri kwakaoma uye kunodhura kuita, izvo zvinokanganisa zvakanyanya kusimudzira chikamu. Nekuda kweizvozvo, huwandu hwekugadzirwa kweRussia uye chiyero chekushandiswa kwemishonga yekuuraya zvipuka uye zvigadzirwa zvehupenyu zvakadzikira zvakanyanya kupfuura eEuropean nemaAmerican mazinga.
Zvakawanda zvasara kuti zviitwe maererano nesainzi zvakawanikwa: zvinodikanwa, kunyanya, kugadzirisa matambudziko neapfupi pasherufu hupenyu hwezvigadzirwa zvehupenyu uye kwavo kusagadzikana kuramba kunaya.
Tags: 2020 Nha. 3Biologizationbiologics